Sida Lacagta Looga Wareejiyo App -ka Lacagta Loogu Gudbiyo Koontada Bangiga Si Fudud -
Bogga ugu weyn Sida Lacagta Looga Wareejiyo App -ka Lacagta Loogu Gudbiyo Koontada Bangiga Si Fudud
Maaddaama uu yahay mid ka mid ah barnaamijyada fintech ee ugu dheer ee socda sannadkan, Lacagta Lacagta ayaa xukuma qaybta maaliyadeed iyada oo loo marayo maaliyaddeeda maaliyadeed ee u saamaxday malaayiin in ay kala wareegaan daafaha dunida; xataa shisheeyaha. Maahan wax la yaab leh inay marmar isbedeleyso Twitter -ka waxaanan ka ogaan doonnaa sababta goor dambe maqaalkan. Baro sida lacag si fudud looga wareejiyo app kaash, si kastaba ha ahaatee, aan ku bilowno…
Waa Maxay App -ka Lacagtu?
Cash App waa adeeg lacag bixin mobiil oo ay soo saartay Square Inc. Waxaa hore loo yiqiinay Square Cash. Waxay u oggolaaneysaa dadka isticmaala inay lacag isku wareejiyaan midba midka kale iyagoo adeegsanaya barnaamijkeeda moobiilka.
Waxaad codsan kartaa oo lacag u diri kartaa koonto kale oo Lacag caddaan ah adiga oo adeegsanaya App -ka Lacagta ama emaylka. Lacag -qaataha ayaa markaa dooran kara inuu lacagta ku bixiyo kaarkiisa debit, ama “Kaarka Lacagta” ee ku jira ATM -yada ama u wareejiyo koonto bangi oo kasta.
Lacagtii Square xitaa waxay soo bandhigtay magac isticmaale u gaar ah, "$ cashtag". Waad wareejin kartaa oo lacag ka codsan kartaa isticmaaleyaal kala duwan adoo galaya magacan adeegsadaha.
Sida PayPal ama Venmo, Cash App waa adeeg xawilaadda lacagta ah oo diiradda lagu saarayo app-ka mobilada. Si kastaba ha noqotee, App Cash wuxuu leeyahay shaqooyin kale sida; ku siinaya koonto bangi iyo kaarka deynta, oo aad ku adeegsan karto ATM kasta. Adigoo adeegsanaya App Cash, waxaad xitaa ku maalgashan kartaa kaydka iyo Bitcoin.
Khasaaraha ugu weyn ee App -ka Lacagta ayaa ah in dheelitirkaaga Lacagta Lacageed uusan caymis ku jirin FDIC taas oo tilmaamaysa inaysan jirin damaanad qaad lacageed oo lacagtaada ah haddii wax qaldamaan.
Taariikhda App -ka Lacagta
App-ka Lacagta waxaa la bilaabay Oktoobar 2013 Square Inc., "shirkad ay wada aasaaseen Jack Dorsey oo Twitter ah". App -ka Lacagta waxaa markii hore loogu yeeri jiray “Lacag -Square”.
Qiyaastii 2015, waa markii Square soo bandhigtay magac -u -gaar ah “$ cashtag” kaas oo ay isticmaaleen ganacsiyada, shaqsiyaadka, ururada, iyo milkiilayaasha meheraddu si ay lacag u diraan una helaan.
Qiyaastii 2017, Square waxay soo bandhigtay awoodda lagu iibsado bitcoin iyo sidoo kale maalgashiga kaydka iyadoo la adeegsanayo App Cash iyo Janaayo 2018, Lacagta Lacagta Lacagta ayaa la casriyeeyay si loo taageero ganacsiga Bitcoin.
Bishii Nofembar 2020, App-ka Lacagta ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday helitaanka Cashuurta Karma ee Karma, oo ah “adeegga xaraynta cashuurta ee aad samayso-bilaash ah” oo qiimaheedu yahay $ 50 milyan.
Waa maxay Faa'iidooyinka Isticmaalka App -ka Lacagta ah?
App -ka Lacagta ayaa caddeeyay inuu yahay mid ka mid ah hababka ugu fudud uguna jaban ee lagu sameeyo macaamil lacageed khadka tooska ah.
Adeegso App -ka Lacagta oo aadan filaynin in wax khidmad ah lagaa qaadi doono adeegyadaada aasaasiga ah sida dirista iyo helidda lacag ama khidmadaha macaamil ganacsi shisheeye. App -ka Lacagta ayaa sidoo kale bixiya kaarka debit -ka ikhtiyaariga ah ee ikhtiyaariga ah “Kaarka Lacagta” kaas oo u saamaxaya dadka isticmaala inay macaamilo sameeyaan oo ay kala baxaan lacagta ay ku haystaan ​​akoonkooda App -ka Lacagta.
App Cash waxaa laga yaabaa inuu yahay mid ka mid ah siyaabaha ugu dhaqsaha badan ee aad lacag ugu diri karto qof qof kale. Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad furto App Cash, geli magaca qaataha iyo xaddiga aad rabto inaad dirto. Kadib marka la xaqiijiyo wareejinta lacagaha, lacagta waa la soo diri doonaa tanina waxay qaadan kartaa oo kaliya ilbiriqsiyo si loo dhammaystiro.
Waxaad ku maalgashan kartaa kaydka waxaadna sidoo kale kula ganacsan kartaa Bitcoin lacag caddaan ah oo macaamil ganacsi ah “1.76%” oo isbarbar dhig ku sameeya aaladaha kale ee cryptocurrency. Wax khidmad komishan ah lagama jari doono markaad maalgashanayso saamiyada sidoo kale waad iibin kartaa saamiyada adiga oo aan lahayn guddi.
Iyada oo la adeegsanayo Lacagta Lacagta, dib -u -bixinta waa suurtogal waana sahlan tahay oo si fudud ayaad u arki kartaa cidda ku soo celisay.
Muxuu Sameeyaa App Cash?
Aaladaha kala duwan ee ku jira App -ka Lacagta ayaa kuu oggolaanaya kaliya maahan inaad lacag keydiso laakiin sidoo kale inaad maalgashato. Hoos waxaa ku yaal qaar ka mid ah astaamaha ugu wanaagsan ee aad ku cuni doontid App -ka Lacagta:
Waxaad ku ganacsan kartaa Bitcoin sidoo kale waxaad ku maalgashan kartaa kaydka, waad diri kartaa oo heli kartaa dhaqso isla markiiba, waxaad u adeegsan kartaa kaarkaaga bangiga ee jira si aad iskaga diiwaangeliso Cash App, waxaad ku dari kartaa lacag caddaan ah koontadaada Lacagta Lacagta ah sidoo kale waxaad lacag ku heli kartaa deebaaji toos ah iyo, laga yaabee inaad kasban karto xoogaa abaalmarin ah.
App Cash wuxuu kaloo bixiyaa Kaarka Lacagta, kaas oo ah kaar debit oo la beddeli karo oo ku xiran dheelitirka App -ka dadka isticmaala.
Hoos, waxaan ku tusi doonaa sida lacagta looga soo wareejiyo app lacag caddaan ah loogu shubo koonto bangi.
Sideen U Sameeyaa App Cash?
Raac tilmaamahan talaabo-tallaabo ah si aad ugu samaysato App-kaaga Lacag-bixinta taleefankaaga Android ama macruufka oo aad u dirto lacag-bixintaada koowaad.
Saxiix App Cash
Waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay inaad samayso waa inaad soo dejiso Lacagta Lacagta ah ka dibna geli lambarka taleefankaaga, ama emaylkaaga midka aad rabto inaad isticmaasho si aad ugu qorto koontada.
Kaashka Lacagta ayaa markaa u baahan doona inuu xaqiijiyo koontadaada. Waxay kuugu soo diri doonaan koodh emayl ahaan ama farriin mid kasta oo aad hoos ku saxiixday. Ku qor koodkaas meesha lagaa rabo inaad ku qorto oo riix "Next".
Waxaa markaa lagu weydiin doonaa inaad dhigto magacaaga hore iyo kan dambe. Ka dibna riix "Next".
Shaashadda xigta ayaa ku weydiin doonta kaarkaaga debit tanina waxay ku xirnaan doontaa koontadaada Lacagta Lacagta ah. Markaa mar kasta oo aad rabto inaad lacag ku darto koontadaada, waxaa lagu samayn doonaa kaarka deynta.
Marka xigta, waxaad u baahan tahay inaad doorato waxa kaashkaagu noqon doono. Tani waxay noqon doontaa sumadda ay dadku isticmaali doonaan markay rabaan inay lacag diraan ama waxay arki doonaan markaad lacag u soo dirto. Waxay ku jirtaa qaabka “$ cashtag”. Calaamad -qaadkan waa inuu ku jiraa ugu yaraan hal xaraf iyo ugu badnaan 20 xaraf. Ka dib markaad gasho App -kaaga Lacagta Lacagta ah, waxaad maamuli kartaa koontadaada, arki kartaa taariikhda macaamilka oo aad diri kartaa lacagaha.
Sidee u shaqeeyaa App Cash?
Waxaad ku wareejin kartaa lacagaha qof kasta oo isticmaala App Cash, ilaa intaad taqaano lambarkooda taleefan, cinwaanka iimaylka, ama $ cashtag gaar ah. Waxaan ku bilaabi doonnaa inaan codsanno lacag iyo sida loo bixiyo qof.
Aynu nidhaahno waxaad doonaysaa inaad qof lacag siiso, waa inaad gasho koontadaada Lacagta Lacagta ah oo aad geliso qaddarka aad rabto inaad ku siiso qofkaas furaha bogga hoyga Cash App.
Waxaa lagu geyn doonaa shaashadda xigta oo lagaa rabo inaad buuxiso macluumaadka App -ka Lacagta ee qofkaas. Haddii aad lacag ka codsanayso qof isticmaalaya App -ka Lacagta, waxay la mid tahay bixinta.
Waxaad sidoo kale awoodsiin kartaa xiriirada haddii aad haysato macluumaadka qofka taleefankaaga si aad u dardar geliso hawsha.
Astaanta saacadda ee geeska midigta hoose waxay ku tusaysaa waxqabadkaaga App Cash, sidaa darteed nooc kasta oo macaamil ganacsi ayaa halkaas ka muuqan doona. Waxay sidoo kale tusi doontaa wixii xirfado ah ee aad samaysay markii aad maalgashanaysay adoo adeegsanaya App Cash.
Khadka is -daba -joogga ah ee hoose waa meesha aad ku maalgashan karto adiga oo adeegsanaya App -ka Lacagta. Waxaad ku maalgashan kartaa etfs, miisaaniyada tusmada ama kaydka shaqsiyeed.
Astaanta guriga ee ku taal geeska bidix ee hoose waa meesha aad ka cusboonaysiin karto macluumaadkaaga; "Macluumaadka bangiga, ku dar lacag caddaan ah, ama kaash."
Tallaabo -Tillaabo Tallaabo ah oo ku Saabsan Isticmaalka App -ka Lacagta
Kahor intaadan bixin lacag -bixinta adiga oo adeegsanaya koontadaada Lacagta Lacagta ah, waxaad u baahan tahay inaad hore u samaysatay kaarka deynta ama nooc kale oo maaliyadeed.
Qaybta xiisaha leh, aan kuu soo qaadanno kaarkaaga debit, kaliya waxaad u baahan tahay inaad raacdo tillaabooyinka hoose;
Boggaaga Lacagta Lacagta Lacagta ah, xagga hoose ee shaashadda, guji astaanta “kaarka” tanina waxay ku geyn doontaa meesha aad ka abuuri doonto kaarkaaga deynta.
Waxaad dooran kartaa midabka aad dooratay kaarkaaga debit sidoo kale waxaad u baahan doontaa inaad saxiixdo kaarka geeska gacanta midig ee hoose.
Markaad gudbiso, waxaa lagu weydiin doonaa meesha aad rabto inaad ka rarto kaarkaaga debit.
waxaa lagu weydiin doonaa inaad buuxiso cinwaankaaga, ka dibna ku xaqiiji magacaaga koowaad iyo kan dambe bogga xiga, taariikhda dhalashadaada bogga soo socda, iyo ugu dambeyn, waxaa lagaa doonayaa inaad dejiso faahfaahinta lacagtaada cusub kaarka bangiga.
Kaadhkan wax lacag ah lagama qaado marka laga reebo haddii aad lacag caddaan ah ku samaysato ATM, ka dibna waxay kugu cashuuri doontaa lacag $ 2 ah. Meel iska dhig, xisaabta App -ka Lacagta ayaa asal ahaan ah koonto lacag la'aan ah.
Sideen Lacag Ugu Dirtaa App -ka Lacagta?
Ku dirista lacag bixinta App -ka Lacagta waa hab deg deg ah oo fudud. Dhammaan waxaad u baahan tahay inaad samayso waa inaad raacdo tallaabooyinkan la soo koobay si aad u bixiso lacagtaada;
Waxaad u baahan doontaa inaad furto App Cash
Gali xaddiga aad rabto inaad dirto oo guji “Bixi”
Geli lambarka taleefanka qaataha, cinwaanka iimaylka ama $ Cashtag
Dhig ujeeddada lacag -bixinta oo noqon karta tusaale ahaan, “quraacda subax” oo guji “Bixi”
Lacagtana waa la bixiyay.
Waxaad u baahan tahay inaad ka warqabto xadka dirista App -ka Lacagta oo kuwan waad kordhin kartaa adoo xaqiijinaya koontadaada.
Haddii ay dhacdo in qofka helaya uusan lahayn koonto App App oo uu ku guuldareysto inuu furo, lacagta waxaa dib loogu celin doonaa koontadaada muddo kadib.
Sideen Lacag ugu Helaa App -ka Lacagta?
Kalfadhigani wuxuu muujinayaa sida lacag looga wareejiyo koontada bangiga si loogu helo app lacag caddaan ah.
Habraacyada aad raaci doontid waa isla habraacyadii aad qaadday markii aad dirtay lacag bixinta oo kaliya halkaan ayaad ka codsan doontaa lacagta.
Si aad lacag u codsato, dooro astaanta “codsi” oo geli qaddarka aad rabto. Xulo cidda aad ka codsanayso Marka saaxiibkaa aqbalo codsigaaga, waa inay raacaan tallaabooyin fudud si ay u dhammaystiraan macaamilka.
Markaa waxaad awoodi doontaa inaad dib u eegto deebaajiga lagu sameeyay koontadaada ee ku jira quudinta hawsha. Dhammaan lacag -bixinta aad ka hesho App -ka Lacagta waxaa lagu kaydin doonaa dheelitirka App -kaaga Lacagta.
Markaad lacag ka hesho qof, ogeysiis ayaa loo diri doonaa quudintaada hawsha oo muujinaysa in koonto lagu shubay. Tan micnaheedu waa inaad u baahan tahay inaad fiiriso tab -hawleedkaaga si aad dib ugu eegto lacag -bixinta.
Taabo lacag bixinta aad rabto inaad aragto. Waxa laga yeelayo lacag -bixinta adiga ayaa iska leh. Waad bixin kartaa oo u diri kartaa lacagta koontadaada bangiga ee ku xiran ama waxaad ku bixin kartaa adiga oo adeegsanaya kaarkaaga deynta ee ku xiran.
Haddii ay dhacdo inaad rabto inaad lacag bixiso, raac habraacyadan si aad ku hagto.
Marka hore, taabo “Balance” tab ee ku jira barnaamijka marka aad furto Lacagta Lacagta oo guji “Lacag Bixin”. Kadibna waxaa lagaa rabaa inaad gasho xaddiga lacagta caddaanka ah ee aad rabto oo aad doorato xawaaraha deebaajiga
Ugu dambayn, ku xaqiiji aqoonsigaaga aqoonsiga taabashada ama PIN.
Waxaa jira laba nooc oo ah fursadaha xawaaraha deebaajiga; “Kaydadka caadiga ah” oo qaadan kara 1-3 maalmood oo shaqo si loo socodsiiyo iyo “Lacag dhigashada degdegga ah” ayaa lagu xisaabin doonaa kaarkaaga debit isla markiiba.
note: Duwan kayd dagdag ah halkaas oo lacagta la galay ee, kayd caadiga ah waa lacag la'aan
Miyuu jiraa Lacag Lacageed Kombiyuutarkayga?
Isticmaalka kombiyuutarka si loogu gudbiyo lacagaha iyada oo loo marayo App Cash wuxuu aad ugu eg yahay marka la isticmaalayo taleefankaaga gacanta. Qalab kasta oo aad isticmaasho si aad u gasho labadan, waxaad awoodi doontaa inaad gasho koontadaada Lacagta Lacagta ah.
Habraacyada la raaco marka lacagta lagu dirayo Cash App iyadoo la adeegsanayo taleefankaaga gacanta waa isla habraacyadii la raacay markii lagu dirayay kombiyuutar. Si kastaba ha noqotee, dadka badankood waxay doorbidaan inay ku isticmaalaan taleefanka taleefanka gacanta App -ka Lacagta Lacagta ah.
Farqiga kaliya ee u dhexeeya labada hab ayaa ah in lagaa doonayo in aad furto bogga Cash App -ka daaqad cusub oo ku jirta biraawsar kasta oo aad isticmaaleyso si ka duwan app -ka moobiilka oo kaliya aad u baahan tahay si aad u furto barnaamijka.
Akhri: Sida Lacag Loogu Wareejin Karo Bangiga Bangiga Kale Si Fudud
Ma loo baahan yahay Koonto Bangi si Lacag loogu wareejiyo App Cash ah?
Ujeeddooyin xaqiijin, koontada bangiga ayaa lagama maarmaan noqon doonta marka aad iska diiwaangelinayso koontadaada Lacagta Lacagta ah taas oo kaaga baahan inaad ku darto bangi adoo adeegsanaya kaarkaaga debit.
Si kastaba ha ahaatee, koontada bangigu ma noqon doonto mid lagama maarmaan ah markaad ku wareejinayso lacag caddaan ah xisaabta Cash App maadaama aad si toos ah lacag ugu heli karto koontadaada Lacagta Lacagta ah.
Ka bixi ATM -ka kasta inkastoo xaqiiqda ah in koontada bangiga ee aad u isticmaashay is -qoritaanka aan loo isticmaalin meel kasta oo ka mid ah habka wareejinta iyo bixitaanka taasoo la micno ah inaysan muhiim ahayn inta hawsha socoto.
Sideen Lacag uga Gudbiyaa App -ka Lacagta Lacagta akoonkaaga Bangiga?
Ku -beddelidda lacag kaashka ah Cash -ka xisaabtaada bangiga waa mid fudud. Waxaa caadi ahaan loogu yeeraa “lacag-bixin”.
Marka hore waxaad u baahan tahay inaad ku furto App -ka Lacagta iPhone -kaaga ama Android -kaaga.
Guji sumadda “Bangiga” ee ku taal geeska bidix ee hoose (sumaddu waxay u eg tahay guri, ama bangi, dhisme kasta oo aad u yeerto.)
Qeybta “Balance Cash”, ku dhufo astaanta midigta ah; "Lacag Bixin."
Liiska “Lacag Bixin” ayaa la soo bixi doona qadarkaaga dheelitirka oo dhan oo diyaar u ah beddelid. Waxaad isticmaali kartaa furaha si aad ugu qorto xaddiga lacagta aad rabto inaad wareejiso.
Markaad go'aansato inta aad rabto inaad wareejiso, waxaad ku dhejin kartaa "Lacag Bixin" xagga hoose.
Kani wuxuu ku geyn doonaa shaashad halkaas oo lagu weydiin doono habka aad jeceshahay inaad dhigato lacagta. Waxaad dooran kartaa “Heerka,” kaas oo qaadan doona ilaa 1-3 maalmood in lacagtu ka muuqato koontadaada bangiga. Laakiin, haddii aad isla markiiba u baahato lacagta, waa inaad taabataa sumadda “Instant” tanina waxay la imaanaysaa khidmad boqolkiiba 25 ah.
Sideen Ugu Dari Karaa Xisaab Bangi My App Cash?
Ku darista koontada bangiga ee Lacagtaada Lacagta ah waa mid fudud laakiin sidoo kale waa muhiim maadaama ay lagama maarmaan u tahay ujeeddooyinka xaqiijinta marka la saxiixayo koontada App Cash. Raac soo koobista hoose si aad kuugu hagto sida aad mid ugu dari karto App -kaaga Lacagta Caddaanka ah.
Maadaama aad hore ugu xidhay koontada bangiga koontadaada Lacagta inta lagu guda jiro hawsha is -qoritaanka, hadda wax baan ka beddeli doonnaa;
Shaashadda /bogga gurigaaga ee Lacagta Lacagta ah, ku dheji tab Bangiga
Waxaa lagu siin doonaa ikhtiyaarro ah inaad xulato "Bangiyada Iskuxiran" ama "Xisaabaadka Iskuxiran"
Waxaad u baahan doontaa inaad gujiso koontada aad rabto inaad wax ka beddesho
Markaa, waad ka saari kartaa koontada bangiga ee hadda jirta adiga oo dooranaya "Ka saar Bangi" ama waxaad ku beddeli kartaa adigoo taabanaya tabka, "Beddel Bangiga".
Raac tilmaamaha oo waxaad awoodi doontaa inaad wax ka beddesho koontadaada bangiga ee Lacagta Lacagta ah.
Waa Maxay Kaararka Uu Taageero App Cash?
Waxaa lama huraan noo ah inaan ogaanno kaararka ay App Cash -ku taageeraan, “kaarka deynta ama kaarka deynta”.
Kaararka amaahda iyo kaararka deynta ee Visa, MasterCard, Discover, iyo American Express waa qaar ka mid ah kaararka ay taageeraan App-ka Lacagta marka lagu daro inta badan kaararka horay loo sii dejiyay ee ay dowladdu awood u yeelatay.
Si kastaba ha ahaatee, ku shubashada lacagta kaararka dawladda ayaan suurtogal ahayn. Kaararka sida PayPal, kaararka ATM -ka, kaararka deynta ganacsiga ee kuwa kale laguma taageero Cash App.
Markaan akhrinay maqaalka hoose, waxaan aad ugu kalsoonahay inay si aad ah kuu caawisay oo ugu muhiimsan, waa inaad awood u yeelatid inaad furato koonto Lacag -Caddaan ah oo aad sidoo kale awood u yeelan karto inaad bixiso lacag -bixintaada ugu horreysa ama wareejintaada ugu horreysa ee lacagaha adoo adeegsanaya App Cash .
Waxaad ku bixin kartaa dib -u -eegista maqaalkan qaybta faallooyinka ee hoose, waxaan jecel nahay akhrinta faallooyinkaaga.
Waxa kale oo aad weydiin kartaa waxa aad u baahan tahay inaad ka ogaato Cash App iyo sida lacag looga wareejiyo koonto bangi oo aan ku jirin maqaalkaaga. Waan tixgelin doonaa faallooyinkaaga.
Waa kuma qofka leh App -ka Lacagta?
Jack Dorsey ma leeyahay App Cash?
Miyaan u baahanahay xisaab bangi si aan u maamulo App Cash?
Maya, waxaad isticmaali kartaa Cashapp xisaab bangi la'aan.
Intee in le'eg ayaa laga qaadaa App -ka Lacagta?
Lacag ah 1.5%-3%
Macaamilka Lacagta Cash ma qarsoodi baa?
Haa, adiga iyo qaataha/soo diraha kaliya ayaa la ogeysiiyaa.
Cod Lacageed: https://cash.app
Talooyin yar oo loogu talagalay Khamaarka Thailand
Bangiyada ugu Fiican San Diego sanadka 2022 | Heerarka, Noocyada Xisaabta, Min. Debaajiga
San Diego waa magaalada labaad ee ugu weyn kadib Los Angeles ee California oo leh xulashooyin aad u wanaagsan oo badan…
Bangiga Chase Online 2021 | Sidee U Shaqaysaa
Ku Wareeji Lacagta Bangiga Ameerika Si Aad U Baacsato | Hagaha Tallaabo-tallaabo-fudud ah ee 2022-ka
"Suruurtagal ma tahay in lacag laga xawilo Bank of America oo loo diro Chase?" waa hal su'aal oo soo socota…
Waa maxay Qoraalka Dakhliga Tallaabooyinka Badan leh? Sidee ayay u shaqaysaa 2021
Warbixinta dakhliga ee talaabooyinka badan waa qaab ay ganacsiyadu u adeegsadaan inay ku sheegaan faa'iidadooda. Shirkadaha ganacsigu waxay leeyihiin…
Bangiyada ugu Fiican Nashville 2022 | Heerarka, Noocyada Xisaabta, Min. Debaajiga
Nashville, oo sidoo kale loo yaqaan "Magaalada Muusikada" kaliya maahan mid caan ku ah muusikada dalka, waxay kaloo leeyihiin…